China Hot ire automatical ike shei ụgbọ ala n'elu ụlọ tent maka mmadụ 2-3 na-eji ụlọ ọrụ mmepụta ihe na suppliers | Yuancheng
Ihe: ABS + ASA ọlaọcha ntekwasa Oxford ákwà + aluminum tube + pearl owu na mpe mpe akwa + nwa polyester anwụnta ụgbụ
Ike n'elu akpaka ụgbọ ala ụlọ tent / ike n'elu akwụkwọ ntuziaka ụgbọ ala ụlọ tent / Camping ụgbọ ala n'elu ụlọ tent
Car tent tent na wireless ime akara, mfe ọrụ, mara mma anya, adabara 2-3 ndị mmadụ na-ebi
* Top shei: ABS + ASA;
1. flọ elu ụlọ site na iji teknụzụ ikuku na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ akụrụngwa kachasị ọhụrụ, enwere ike imeghe ma mechie ya site na njikwa, ma nwee ike iji aka ya rụọ ọrụ site na bọtịnụ conrtol n'akụkụ ụlọikwuu ahụ.
2. Usoro ntinye na ibudata di nfe ma di nma, mmadu abuo nwere ike mezue nbudata na nbudata.
4. A na-ekpuchi oghere nke ákwà ahụ
5. Enwere akpa akpụkpọ ụkwụ abụọ n'akụkụ abụọ nke ụlọikwuu ahụ, a na-echekwa ala nke akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ntupu maka mma Sand na gravel leaking;
6. Okpokoro nwere mmiri mmiri iji gbochie mmiri mmiri ozuzo ịwakọba n’ime ala;
7. Enwere ike iji okpukpu ulo-ikw of a gbakọrọ agbakọọ dị ka mkpuchi mmiri kama iche mkpuchi mmiri ozuzo dị iche, nke dị mfe ịrụ ọrụ
8. tlọ elu ụlọ ahụ gafere ule EMC.
Core Advantage: wireless ime akara ma ọ bụ bọtịnụ mgba ọkụ ụzọ abụọ akara akpaka push mkpanaka ebuli, mfe ọrụ / mara mma anya, adabara SUVs nke dị iche iche ụgbọala nha / mma, ala, ike, windproof, mmiri ozuzo, sandproof, coldproof / adabara 2- 3 ndị mmadụ na-ebi.
Nke gara aga: Manual ịkpakọba ụlọ tent
Osote: Ike n'elu mpịachi mmadụ anọ ụlọ tent
Kpuchie N'okpuru Car, Car Wine oyi, 12v Car Igwe nju oyi oyi, Mako Car oyi, Obere igwe oyi 12v, Carlọ Ulo Ugbo Ala,